XOG: Maxamuud Sayid Adan, Madaxweyne-kuxigeenka Jubbaland oo lagu eedeeyay Wax qabad la,aan. – Kismaayo24 News Agency
Kaydka Wararka Xulka ah
XOG: Maxamuud Sayid Adan, Madaxweyne-kuxigeenka Jubbaland oo lagu eedeeyay Wax qabad la,aan.
Kaydka Wararka Xulka ah Somali News Top News
by nairobi 8th July 2017 8th July 2017 089
Ayadoo maalamahan ay xildhibaanada Fedderalka iyo kuwa Dowlad Gobaleedyada ay kasoo laabteen fasax ay ku jireen ayaa waxaa bilowday kala fadhiyadii caadi ahaa.
Wararka ka imaanaaya Dowlad Gobaleedka Jubbaland ayaa tibaaxaayo in xildhibaanada iyo Maamulka ay wadaan mooshin ka dhan ah Madaxweyne-kuxigeenka Jubbaland Maxamuud sayid Adan.
Xildhibaanada iyo Masuuliyiinta Maamulka Jubbland ayaa ku eedeeyay Madaxweyne-kuxigeenka wax qabad la,aan iyo mususqmaausq baahsan ayadoo lasheegaayo in tan iyo markii lamagacaabay uu iska fadhiistay kismaayo asagoo ku yimid dib uheshiin iyo awood qaybsi.
Mudane katirsan Xildhibaanda Jubbaland oo magiciisa qariyay ayaa sheegay in Maxamuud sayid adan uu ku fashilmay shaqadii loo idmaday asagoo had iyo jeer u fadhiya qayilaad iyo hurdo waa siduu hadal u dhigaye.
Sidookale Maxamuud Sayid Adan ayaa bilihii lasoo dhaafay eedaymo kulul uga imaanayeen gobalka Gedo asagoo wax xiriir ah ama ka warqab ah layeelan maamulka iyo bulshada gobalka ku dhaqan kuwaas oo abaaro iyo colaado la ildaran.
Usbicii lasoo dhaafay ayay aheed markii ay cidamada Gobalka gedo kusugan ay cabasho soo gudbiyeen ayaga codsaday in lalasoo gaaro taageero military.
Sikastay ahaabtaba Waa markii ugu horaysay ay xildhibaanada iyo maamulka jubbaland ay eedeeyaan Maxamuud Sayid Adan tan oo sababi karta in meesha lagasaaro.
Farmaajo oo maanta lafilaayo in uu Baarlamaanka ka codsado in lajoojiyo Mooshinka iyo arrimakale
Dowlada Federaalka oo Kalsoonidii Ahlusunna Lumisay
DEG DEG: Shirkii Nabada ee Magaalada Galkacyo oo Hada Socda iyo Qodobo Xasaasi ah oo La isku Mari la’yahay
TOP NEWS: Dhageyso Maxkamada Dagmada Baydhabo oo Xukuno lacag u badan ku riday Dad lagu eedeyay in ay…
Ahlu Sunna Waljameeca oo Hay'adaha deeganadooda ka howl gala Amar adag duldhigey.